एक विशेष रक्त शरीर सुरक्षा मा एक प्रमुख भूमिका खेल्ने - यो सेतो रक्त कि ज्ञात छ। को मूत्र, रगत र धब्बा आफ्नो नम्बर कारक र रोगहरु को एक किसिम मा निर्भर गर्दछ। सेतो रक्त को स्तर, उदाहरणका लागि, सामान्य गर्न ल्याउन वृद्धि वा तोकिएको दबाइ, आहार वा परम्परागत विधिहरू विरामीहरु को कारण निर्भर भएको leukocytes कम क्रममा लागू छन्।
सेतो रगत सेल गणना मा वृद्धि को लागि कारण
सामान्यतया 4-9 अर्ब मानिसहरूलाई मा रगत को 1 लीटर मा leucocytes (4 देखि 9, E10, E10 गर्न) हुनुपर्छ। सेतो रक्त को संख्या मा रगत कि रोग रूपमा, केही परिस्थितिमा अन्यथा स्वस्थ मान्छे मा arising छ साथै यसको कारण कुनै पनि रोग मा निहित गर्दा दुवै शारीरिक हुन सक्छ वृद्धि, वा leukocytosis।
शारीरिक leukocytosis लेखिन्:
तीव्र psycho-भावनात्मक वा शारीरिक तनाव पछि;
खानाको पछि, यो मामला मा leukocytes को संख्या 10-12 अर्ब प्रति रगतको लीटर भन्दा बढी छैन।
चिसो पानी वा तातो टब निर्णय एक लामो बसाइ पछि;
महिनावारी को शुरू अघि केही दिन महिलाहरु;
गर्भावस्था को दोस्रो आधा समयमा।
रोग leukocytosis मा, सेता रक्तकोषहरू, आवश्यक गम्भीर उपाय को ग्रहण कम। यो विकृति गराउँछ:
। यस्तो appendicitis, pleurisy, pancreatitis, निमोनिया, मेनिनजाइटिस, otitis मिडिया, गठिया र यति मा घ रूपमा भडकाऊ रोगहरु।
3-4 डिग्री बल्न;
profuse रक्तस्राव, मृगौला समस्या, लेकिमिया र uremia।
रगत leukocytes lowering लागि लोक उपचार
माथि उल्लेख रूपमा, उच्च सेतो रगत सेल गणना तपाईंलाई तुरुन्त डाक्टर, एक रक्तविशेषज्ञ परामर्श गर्नुपर्छ leukocytes समस्या छ भने त, गम्भीर रोग कारण हुन सक्छ। तर, कारण leucocytosis छन् भने सार्स, इन्फ्लूएंजा र अन्य यस्तै रोगहरु, रगत लोक उपचार सम्भव प्रयोग शोरबा मा तल्लो सेतो रक्त कागती फूल, एक हिसाब 1 Tbsp देखि पीसा छ जो। एल। कागती रंग उम्लिरहेको पानी 1 कप, 10 मिनेट आगो र जोश मा राखे। त्यसपछि शोरबा फिल्टर र सट्टा चिया को 2-3 कप पिउन। यस्तो hepatitis B विरामीहरु रूपमा कलेजो समस्या विरामी, धूम्रपान मसालेदार र फैटी सारा पोलेको प्रयोग समावेश जो एक आहार, पालन गर्नुपर्छ र धूम्रपान र पिउने रक्सी रोक्न। यस्तो स्ट्रोक वा myocardial infarction रूपमा निदान हृदय रोग संग विरामीहरु लागि जाँदा, तिनीहरूले जन्माउने कारण उपचार गर्न आवश्यक छ। सामान्यतया यस्तो अवस्थामा, यो अक्सर सम्भव छ सेतो रक्त कम अतिरिक्त उपायहरु बिना।
मूत्र मा leukocytes को स्तर परिवर्तन को कारण
सामान्यतया, महिला मूत्र विश्लेषण 0-6, र 0-3 पुरुष लागि leukocytes देखाउनुपर्छ। leukocyte असामान्यताहरु लागि मूत्र assay को परिणाम रेकर्ड थिए भने, यो शरीर केही सुनिंनु उत्पन्न भन्ने हो। - विपरीत साँचो हुँदा जो, सेतो रक्तकोषहरू कम तत्काल कार्य, र leukopenia आवश्यकता मूत्र, सेता रक्त को स्तर हुर्काउन leucocyturia: यस मामला मा, त्यहाँ दुई सम्भव परिस्थिति हो। Pyuria सामान्यतया यस्तो pyelonephritis, cystitis र urethritis रूपमा बिरामीको मूत्र प्रणाली रोगहरु को उपस्थिति संकेत गर्छ। साथै, यो मानिसहरूलाई आउँछ जब मूत्र मा सेतो रक्त को वृद्धि स्तर प्रोस्टेट ग्रन्थि समस्या संकेत हुन सक्छ। एकै समयमा, leukocytes मा यस्तो मूत्र विश्लेषण - amyloidosis, क्षयरोग, वा glomerulonephritis मा बिरामीको मृगौला क्षति उपस्थिति को शङ्काको लागि कारण छ। leukopenia सन्दर्भमा, यो संक्रामक, अक्सर पुरानो रोग को एक चिन्ह हो, र पनि लामो समयसम्म तनाव को एक परिणाम हुन सक्छ।
मूत्र मा leukocytes को स्तर कम गर्ने उपायहरू
को मूत्र मा सेतो रक्त कसरी कम गर्न - पछि रोगी रिपोर्ट आफ्नो मूत्र परीक्षण आफ्नो leukocyturia उपस्थिति संकेत कि, पहिलो कुरा तिनीहरूले सामान्यतया इच्छुक छन्। तथापि, यो जन्माउने रोग निको गर्दा मात्र सम्भव हुनेछ बुझ्ने गरिन्छ। प्रायजसो, सेतो रगत एन्टिबायोटिक उपयोग, मूत्र मा कक्षहरू संख्या मा वृद्धि गर्न प्रमुख, संक्रमण लड्न। अपवाद cystitis छ। यस मामला मा, सम्भव र प्रयोग लोक उपचार रूपमा मूत्र मा कम leukocytes medicaments प्रयोग बिना। 1 अनुपात: उदाहरणका लागि, यो दिनमा खपत तरल को मात्रा वृद्धि गर्न, र, camomile र मसलाको को न्यानो चिकित्सकीय decoction 1 लिइएका एक स्नान लिन सिफारिस गरिएको छ।
किन यो एक धब्बा सेता रक्त को संख्या वृद्धि गर्न सकिन्छ?
प्रत्येक यात्रा मा महिला को लागि एक स्त्रीरोग विशेषज्ञ सेतो रक्त को स्तर मा सहित छानबीन जो वनस्पति लागि swab लिइएको छ। यो माइक्रोस्कोप को दृश्य को एक क्षेत्रमा एक स्वस्थ महिला को दर पत्ता 15-20 leukocytes गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ। यो रकम नाघेको छ भने, यो लैंगिक क्षेत्र सुनिंनु मा साथै यौन सहवास समयमा प्रसारित, vaginitis वा Colpitis रूपमा संक्रमण कारण छ जो, हुन्छ कि तर्क गर्न सकिन्छ। यो सामान्यतया थप प्रतिरक्षाविज्ञानी, bacteriological र अन्य अध्ययन को लागि आवश्यक छ, जसले परिणाम अक्सर पहिचान एक लामो समय को लागि शरीर मा वर्तमान र गरेका छन् संक्रमण आफूलाई प्रतिरक्षा प्रणाली एक कारण वा अर्को लागि तल हुँदा महसुस भनेर संकेत गर्छ। धेरै त्यस्ता घटना गर्भवती महिला अवलोकन गर्दै - हर्मोन शरीर परिवर्तन र प्रतिरक्षा प्रणाली मा परिवर्तन pathogenic प्रक्रियाहरू विभिन्न प्रकार को एक कारण सक्रियता बन्न सक्छ।
एक धब्बा मा सेतो रक्त कसरी कम गर्ने?
स्थिति महत्वपूर्ण छैन र लोक उपचार संग दिइँदैन गर्न सकिन्छ भने, योनी धब्बा मा सेतो रक्त कम छ, (2 चमचा। पानी एल कच्चा 1/2 लीटर) chamomile को आधा-बोर्ड दैनिक syringing न्यानो decoction गर्न Resort गर्न सिफारिस गर्न सकिँदैन। तपाईं पनि ओक छाल, स्टेटजोन्स wort, chamomile, nettle मूल र रातो एक decoction संग नियमित न्यानो sitz स्नान गर्न सक्छन्। यो उद्देश्य लागि, यी सबै सामाग्री बराबर अनुपात मा मिश्रित र (उम्लिरहेको पानी3लिटर4Tbsp। सुकेको जडिबुटी को एल) एक अपारदर्शी कचौरा मा पीसा छन्। यो जनन र छाला बाल्न छैन रूपमा त स्नान पानी, 40-45 डिग्री को दायरामा हुनुपर्छ भनेर सम्झना गर्नुपर्छ।
Bile को ठहराव को लक्षण र तिनीहरूलाई हटाउन
नवीन शिक्षा विधिहरू - विद्यालय र उच्च शिक्षा विकास गर्न नयाँ तरिका
अर्को ठेगाना बाट ई-मेल पठाउन सजिलो तरिका
औषधि "Rimadyl" (कुकुर लागि)। अमूर्त
डिजेल इन्धन लागि Antigel: समीक्षा। डिजेल इन्धन लागि Antigel: विकल्प सिफारिसहरू
Windows 7: खेल लागि सबै भन्दा राम्रो पेजिंग फाइल आकार
कसरी अलग बच्न: म मान्छे दियो?
Thoracic मेरुदण्ड हर्निया
आँखा किन पानी जस्तो सडक मा, के गर्ने? किन बिहान सडक मा पानी जस्तो आँखा